Somaliland: Taliye Cusub Oo La Wareegay Qaybta Booliiska Ee Gobolka SOOL - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Taliye Cusub Oo La Wareegay Qaybta Booliiska Ee Gobolka SOOL
Munaasibad xilka loogu kala wareejinayo taliyihii qaybta booliska iyo taliyaha haatan loo soo magacaabay ayaa lagu qaybtay qaybta booliska gobolka Sool ee Magaalada Laascaanood.
Munaasibadan oo ay goobjoog ka ahaayeen masuuliyanta Gobolka, degmada, ciidamada booliska hogaanadiisa kala duwan iyo waxgaradba, ayaa lagaga hadlay hawlaha uu soo qabtay taliye qaybeedka xilka wareejiyey iyo hawlaha u yaal taliyaha Cusub.
G/dhexe Ibraahin Jaamac Daad oo halkaasi ka warbixiyey hantida muuqata ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin gaadiid gaadhay 13 kuwaas oo qayb ka ahaa xil-wareejinta.
Waxaa uu xusay in ay jiraan dhibaato xoogan oo degaanka ka taagnayd mudooyinkii u danbeeyey oo ah Khamriga waxaana uu kula dardaarmay taliyaha qaybta ee cusub inuu u feejignaado.
G/Dhexe Khaliif Maxamed Xirsi Taliye qaybeedka cusub ayaa waxaa uu sheegay in diyaar u yahay in uu dhabarka u dhigo xilkan uu hada qabtay, waxaanu sheegay in aanu isagu waxba qaban karin hadii aan dadweynaha ay u shaqaynayaan Caawin.
“Xalay Anigoo lugaynaya waxaan arkaayey qaar askar heegan ah dhagax ku tuuraya, runtii askarigu dan uu leeyahay uma taagna ee waxaa uu u taagan yahay danta dadweynaha, waa ayaan daro hadii kii la illaalinayey uu isagu garan waayo dantiisii” ayuu yidhi Khaliif isagoo intaas raaciyey in uu yahay dhalintii ku soo kacaantay magaalada farkasta oo la dhigana dhaadi kara, inay taas xasuusnaadaana waa uu u muujiyey.
Guddoomiyaha Gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir oo xil-wareejintaas soo gabagabeeyey ayaa waxa uu sheegay wadashaqayntii wacnayd ee ay lahaayeen taliyihii hore, waxaanu balan qaaday in aanay waxba ka hagranayn taliyaha Cusub.